Real Madrid oo sharuud adag ku xirtay u dhaqaaqista Kylian Mbappe ee Kooxda PSG
Home Horyaalka France Real Madrid oo sharuud adag ku xirtay u dhaqaaqista Kylian Mbappe ee...
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u ishaartay Paris Saint-Germain inaysan u dhaqaaqi doonin Kylian Mbappe ilaa kooxda heysata horyaalka Faransiiska ay diyaar u tahay inay iibiso.
Mustaqbalka 22 jirkaan ee Paris ayaa weli ah mid si weyn loo hadal hayo, iyadoo qandaraaskiisa haatan ee caasimada Faransiiska uu dhacayo xagaaga 2022.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Mbappe uu diyaar u yahay inuu heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixo PSG isagoo doonaya inuu ku biiro kooxda heysata horyaalka Spain labada sano ee soo socota.
Madrid uma muuqato inay heysato lacagtii looga baahnaa inay kula soo saxiixato xiddiga reer France sannadkan sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus.
Sida laga soo xigtay wargayska Marca , maamulka kooxda reer Spain ayaa go, aansaday in ayna si Rasmi ah ugu dhaqaaqin xiddiga ku guulaystay koobka adduunka ilaa ay PSG diyaar u tahay in xidigan iska iibineyso maadama ay jirto ‘ixtiraam buuxa oo u dhexeeya labada kooxood’.
Mbappe, oo sidoo kale lala xiriirinayo Liverpool , ayaa dhaliyay 107 gool 149 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan kooxdiisa haatan tan iyo markii uu ka yimid Monaco.
Previous articleIago Aspas oo sheegay in Barcelona ay qalad weyn ku sameesay iibinta Luis Suarez
Next articleAc Milan oo 4-0 ku garaacday Crotone Xili uu labo gool dhaliyay Z. Ibrahimovic